Oghere chassis dị jụụ 70mm
1. Iji B85 chipset, PCIE ala, nnukwu bandwit na ike ndakọrịta.
2. Kaadị njikwa na-eji nhazi azụ azụ, nke kwụsiri ike ma ghara imebi;kaadị njikwa + oghere dị n’okpuru ala, imewe modular, ọrụ dị mma na nrụzi, yana mkposa na mgbakọ dị mfe.
3. Igwe ọkụ na-arụ ọrụ, njikwa dị mma, dị ọcha ma dị mma n'ime, ahịrị ole na ole na eriri ikuku dị mma.
4. A na-akwado kaadị eserese iche iche iji belata ibu nke motherboard, belata ihe ize ndụ nke mmebi motherboard, ma mee ka kaadị eserese na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ogologo ndụ.
5. Nhazi nke n'ihu na azụ ndị na-agba ọsọ okpukpu abụọ, okpukpu abụọ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ndị na-agba ọsọ ọsọ na-arụ ọrụ nke awa 50,000, dị ugbu a dị ka 0.48A, nnukwu ikuku ikuku na ogologo ndụ ọrụ.
6. 65mm ultra-wide ndịna-emeputa kaadị oghere, adabara ọtụtụ ndịna-emeputa kaadị na ahịa.
7. A na-eji igwe oyi na-acha oyi na-eme chassis, ọkpụkpụ ya bụ 1mm, elu ya bụ ájá ojii.
8. The pụrụ iche n'ihu panel usoro, n'ihu VGA ọdụ ụgbọ mmiri, USB n'ọdụ ụgbọ mmiri, wired netwọk ọdụ ụgbọ mmiri, ike ọdụ ụgbọ mmiri, nwere ike deployed na uche, na bụ ihe ọrụ-enyi na enyi.
9. Sistemụ nchọpụta ọrụ kaadị eserese pụrụ iche nwere ike ịgụ ọnụ ọgụgụ kaadị eserese ngwa ngwa wee chọpụta ngwa ngwa kaadị eserese na-ezighi ezi.
Nkọwa ihe onyonyo bụ isi: Igwe Ngwuputa a na-abịa ọkọlọtọ nwere ike 800W.N'ihi ụdị agbapụ agbapụ dị iche iche, isi ihe ngosi ihe osise nwere ike 1600W.
1. Nke a ọ bụ mkpọtụ enweghị mkpọtụ?
Ndị na-egwuputa ihe dị jụụ anaghị enwe mkpọtụ.E jiri ya tụnyere ígwè ọrụ Ngwuputa ọdịnala, mkpọtụ ahụ dị obere.A na-ekpebi uru mkpọtụ site na kaadị eserese, ọkụ ọkụ na gburugburu ojiji ị na-ahazi.
2. Ogologo oge ole ka oge nnyefe ngwaahịa nkịtị na-ewe?
Enwere ike ibupu ngwaahịa ntụpọ n'ime ụbọchị 7.Ngwaahịa ahaziri mkpa ka gị na ndị ọrụ kwurịta oge nnyefe.
Na 2015, anyị malitere itinye aka na nyocha na mmepe, mmepụta na ahịa nke ngwaahịa ndị metụtara blockchain Mining Machine.Site na ahụmịhe mmepụta ihe bara ụba na ahụmịhe ahịa, anyị na-emeziwanye ma na-ebuli ngwaahịa anyị mgbe niile.Tụkwasị na nke ahụ, anyị nwere ndị ọkachamara mgbe-ahịa na-azụ ahịa na ndị ahịa mba ọzọ iji hụ na onye ahịa ọ bụla nwere ahụmahụ ịzụ ahịa kacha mma.
Nke gara aga: Chassis mkpọtụ obere mkpọtụ na-akwado kaadị 3
Osote: Ndị na-egwupụta ụlọ igwe IDC dị elu nwere ọkwa nke 50mm
Motherboard 2 kaadị in-line / PCIE/ oghere 70mm
Onye ofufe 1 Fan (DN12cm) 3500RPM
mkpọtụ na-arụ ọrụ (ya na kaadị eserese RX588 na ọkọnọ ike 800W) 66.4dBA
Nha chassis 300MM(L)*430MM(W)*170MM(H)
Nnwale a bụ ụdị kaadị 2 nwere kaadị eserese 2 RX588 na nkwụnye ọkụ 800W.